Xiaomi 10W MAX dib u eegista xeedho wireless | Qiimaha iyo astaamaha | Androidsis
Xiaomi 10W MAX falanqaynta xeedho wireless
Rafa Rodríguez Ballesteros | | Qalabka kale, Reviews
Toddobaadkan waxay ahayd inaan isku dayno a Sheyga Xiaomi, taasna marwalba waa daaweyn. Sida aan ognahay, shirkadda Shiinaha ayaa caan ku ah soo saarista aaladaha tayada leh. Oo markan waxaan u dhigay Xiaomi 10W MAX xeedho wireless. Xeedho wireless ah oo muddo dheer la sugayay oo keenaysa sheeko cusub oo muhiim ah.
Fiilooyin aan xireynin ayaa suuqa yimid iyagoo aad u cabsi badan. Sababta ugu weyn maxaa yeelay waxaa aad u yaraa taleefoonada casriga ah ee ku qalabaysan tikniyoolajiyadda lagu isticmaali karo. Hadda waan aragnaa taleefanno aad u tiro badan ayaa taageeraya lacag-bixinta wireless-ka. Sidaa awgeed, shirkadaha ayaa u jeestay inay soo saaraan. Dabcan, Xiaomi ma yaraan karto.
Marabtaa xeedho wirelesska ugu dhaqsiyaha badan qiimo dhimista ugufiican? Hagaag, halkan guji oo ku iibso kaliya .19,99 0054 adoo isticmaalaya nambarka SPXNUMX. Dheeraad ah waxaa ku jira kharashka dhoofinta bilaashka ah! Waa dalab ansax ah oo keliya illaa Noofambar 30, 2018.
1 Xiaomi 10W MAX xeedho xawli leh oo degdeg ah oo raqiis ah
2 Sidee ayuu yahay xeedha Xiaomi 10W MAX?
3 Xiaomi 10W MAX waa amaan
4 Dheeraad ah oo ka dhigaya mid ka fiican kuwa kale
5 Faa'iidooyinka iyo Qasaaraha Xiaomi 10W MAX Wireless Charger
Xiaomi 10W MAX xeedho xawli leh oo degdeg ah oo raqiis ah
Hadda waxaan haynaa qaybo kala duwan marka la eego xawaaraha xamuulka wireless. Dhammaan xeedhooyinku kuma habboona dhammaan taleefannada casriga ah. Dhamaan taleefannada casriga ah laguma soo oogi karo uun xeedho kasta. Wax aan rajeyneyno in muddo kadib gebi ahaanba midoobi doonaan si ay ugu fududaato helitaanka xeedho sax ah.
Saldhigyada ugu horreeya ee leh fiilo la'aan wireless si ay ugu dhuftaan suuqa waxay gaarayaan 5 watts. Waxaa jira boosteejooyinka kale ee hadda jira in horay u leeyihiin waxa loogu yeero wireless wireless lacag deg deg ah, taas oo gaadho 7,5 watts. Dabcan, sii deynta ugu dambeysay sanadkan waxay horey u leeyihiin a 10 watt lacag la'aan wireless lacag la'aan ah.
Xiaomi ayaa tan cusub ku cusbooneysiisay noocyadeeda kala duwan ee fiilooyin wireless ah 10W MAX. Oo waxay bixisaa qalab ku habboon moodooyinka ugu dambeeyay Ka imanaya suuqa. Iyada oo xeedho 10 watt ah ayaa suurtagal ah in lacag lagaa qaado, tusaale ahaan, moodelladii ugu dambeeyay ee Samsung, sida S9 ama Xusuusin 9. Qalabkan fiilada xarkaha leh ma gaabin doontid waqti kasta iyo hadda adiga ayaa kuu noqon kara wax ka yar € 15.
Si aad ugu iibsato xeedho qiimaha ugu fiican xusuusnow inaad ku qasban tahay halkan soo gal y isticmaal lambarka xayeysiinta SP0054 kaas oo la heli doono ilaa 30-ka Nofeembar, 2018.
Sidee ayuu yahay xeedha Xiaomi 10W MAX?
Wax yar ayaan ka dhihi karnaa xeedho bilaa wireless ah. Ma jiraan waxyaabo badan oo la sheego oo ka baxsan midabka, qalabka dhismaha iyo isku xirayaasha ay leeyihiin. ay qaybta kore waxay ka samaysan tahay silikoon aan siibiil ku socon iyadoo aad loo dhammeeyo taabashada. Bartamaha, astaamaha Mi ayaa taagan, oo la mid ah tayada shaki la'aan. Gudaha hoose waan helnay bir lagu daweeyey midab buluug madow ah taas oo siinaysa taabasho soo jiidasho leh. Birta ku dul wareegsan caag si ay taageeradiisu u xasilloon tahay oo aanu u siibanayn.
Dhinaca hore waxay ku leedahay wax yar Iftiin cagaaran taasi waxay noo sheegaysaa goorta ay isku xidhan tahay iyo markay shaqaynayso. Oo uu ku jiro gadaal waxaan helnay ah USB isku xira C si loogu xidho miinooyinka. Qalab fudud oo aan waxba ka soo muuqan laakiin bixiya dhammeystir aad u fiican iyo muuqaal aad u soo jiidasho iyo qurux badan.
Xiaomi 10W MAX waa amaan
Xiaomi 10W MAX Wireless Charger waa xeedho aamin ah. Waa inaanan cabsan maxaa yeelay waxay sababi kartaa nooc kasta oo dhacdo ah. Xiaomi waxay si damiir leh ugu hibeeyeen qalabkan wax kasta oo lagama maarmaan u ah inay sidaa sameeyaan. Biilasha leh sheyga birta ilaalintiisa, markaa haddii ay ogaato lacag, ama fure, taasi waxay sababi kartaa wareeg gaaban iskiis ayuu isu demiyaa.
Sidoo kale si otomaatig ah ayuu u deminayaa haddii uu ogaado in heer kulka uu sare u kacayo taasi way ka baxsan tahay tallada. Haddii kululaynta uu sababay xeedho lafteeda, nidaamkaaga nidaaminta heerka iyo awoodda lacag-bixinta si heerkulka loogu soo celiyo heerkii ugu fiicnaa. Sidaa darteed, wax walba waa la xakameyn doonaa haddii ay dhacdo kuleylka qalabka ama xeedho.
Dheeraad ah oo ka dhigaya mid ka fiican kuwa kale
Mid ka mid ah cilladaha aan awood u lahayn inaad ku buuxiso taleefan xarkaha fiilada wireless-ka ayaa ah in taleefanka laftiisa ay tahay inuu la xiriiro midka damacsan. Sidaas darteed, illaa iyo hadda waxay ahayd inaan ka saarno kiiska ama qolofka taleefanka casriga ah si aan u awoodno inaan lacag ka qaadno. Wax un noqday dhibaato dhab ah maaddaama ay ahayd inaan maalin walba qabanno.
Hagaag tani mar dambe lagama maarmaan noqon doonto oo leh xeedha cusub ee Xiaomi xeedho wireless. Mid ka mid ah waxyaabaha dheeriga ah ee la filayo ee xeedho-bixiyahani bixiyo ayaa ka mid ahaa dalabyada ugu waaweyn ee adeegsadayaasha tan iyo markii ay suuqa ku dhufteen. Ugu dambeyntii waanu buuxin karnaa telefoonadayada la jaan qaadi kara wireless daboolka leh.
Xeedho Xiaomi 10W MAX waxay u oggolaaneysaa lacag-bixinta wireless-ka oo leh masaafo dhan 4mm. Taasi waa, ficil ahaan kiis kasta ama qolof suuqa. Shaki la'aan waa horumar muhiim ah oo ka dhigaya fiilooyinka xarkaha wireless sidii ugu fiicneyd ee ay ahaadaan bilowgii. Halkan waxaad ka iibsan kartaa Xiaomi 1oW MAX qiimaha ugu fiican.
Faa'iidooyinka iyo Qasaaraha Xiaomi 10W MAX Wireless Charger
ka Qalabka dhismaha Waxay u muuqdaan kuwo sax ah, silikoon aan sibibix ahayn oo dusha sare ah, iyo bir mugdi ah oo xagga hoose ah. Xaqiiqdii mid doorashada saxda ah in isku daraa si yaab leh si ay u bixiyaan wax soo saarka la dhamaystirka aad u fiican.
Su xajmiga iyo dhumucda aad ayey u xaddidan yihiin, tani waa wax wax badan ka qabta raaxo badan in la xidho. Waxay ku habboon tahay jeeb kasta miisaankiisuna aad buu u yar yahay.
Taasi waa qiraysaa ku shub ilaa 10 watthaa, oo ha noqoto socon kara ugu dambeeyay Daahfurka suuqyada ayaa ka dhigaya midka ugu muhiimsan suuqa.
Su qiimaha waa soo jiidasho kale oo muhiim ah. Qalab xawli leh oo dhakhso leh, isku-dhafan oo muuqaal ahaan soo jiidasho leh ayaa aad ugu badan qiime fiican.
Qalabka iyo dhammaadka
Miisaanka fudud iyo cabirka
La jaanqaadka kii ugu dambeeyay "sare"
Ma lahan isku xiraha shabakadda korantada. Shaki la'aan tani waa dhibic taban maadaama aan u baahanahay kombiyuutarka ama ilo kasta oo USB ah si aan u awoodno inaan u adeegsanno. Uma muuqato macquul in xeedho kaliya ay la socoto fiilada USB-ga. Bar taban.
Sidoo kale, USB Nooca-C cable taas oo ku timaadda sanduuqdeeda ayaa soo baxda aad u gaaban. Si aad ugu shubto miiska ku xiran kumbuyuutarka dhib ma leh. Laakiin haddii aan rabno inaan ka qaadno meel kale oo fiilada wax yar u jirta, waxay noqon doontaa hawl cakiran oo leh xarig gaaban.
Ma laha isku xiraha darbiga
Fiilada USB-ga oo aad u gaaban
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Reviews » Xiaomi 10W MAX falanqaynta xeedho wireless